အဓိကသီးနှံများ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ရေး၊ ပို့ကုန်တိုးမြှင့်ရေး အတွက် အစိုးရ နှင့် ပုဂ္ဂလိကများ အပိုင်းက သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများအလိုက် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး နှင့် လိုအပ်ချက်များ ညှိနှိုင်း | MOALI - Ministry of Agriculture , Livestock and Irrigation
MOALI - Ministry of Agriculture , Livestock and Irrigation
အဓိကသီးနှံများ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ရေး၊ ပို့ကုန်တိုးမြှင့်ရေး အတွက် အစိုးရ နှင့် ပုဂ္ဂလိကများ အပိုင်းက သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများအလိုက် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး နှင့် လိုအပ်ချက်များ ညှိနှိုင်း
နိုင်ငံတော်၏ အဓိကသီးနှံများ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ရေး၊ ပို့ကုန်တိုးမြှင့်ရေး အတွက် အစိုးရ နှင့် ပုဂ္ဂလိကများအပိုင်းက သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများအလိုက် အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး နှင့် လိုအပ်ချက်များ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များ နှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်(UMFCCI) အောက်ရှိ ညီနောင် အသင်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲများကို မေလ (၁၇)ရက် က ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်း မြို့နယ်၊ နတ်မောက်လမ်းရှိ ယုဇနဧည့်ဂေဟာ ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင်ထွဋ်ဦး ၊ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ဆွေလင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာရဲတင့်ထွန်း နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ရှေးဦးစွာ မြန်မာ့ပြောင်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း မှတာဝန်ရှိသူများအား တွေ့ဆုံပြီး ပြောင်းဈေးကွက် ယှဉ်ပြိုင်မှု အခြေအနေ၊ ပို့ကုန် အရည်အသွေးပြည့်မီရေး အတွက် ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာ နှင့် စက်ကိရိယာများအသုံးပြုနိုင်ရေး၊ ကန်ထရိုက်လယ်ယာ စနစ် ကျယ်ပြန့်စွာဆောင်ရွက်ရေး၊ အရည်အသွေးမြင့်မားရေးအတွက် အခြေခံအဆောက် အအုံနှင့် သိုလှောင်ရုံလုပ်ငန်းများ တွင် ကာလတို ကာလရှည် အရင်းအနှီး ချေးငွေရရှိရေး အတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အလားတူ မြန်မာနိုင်ငံဆီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ၊ ဆီစက်ပိုင်ရှင်များအသင်း တို့မှ တာဝန်ရှိသူများအား တွေ့ဆုံ၍ စားသုံးဆီ ဈေးကွက် အလားအလာ နှင့် ဆီစက်လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာရေး အတွက် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများ ၊ နေကြာနှင့် မြေပဲ မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ခြင်းကို တောင်သူနှင့်အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ လက်ရှိ ဆီစက်များ စွမ်းအားပြည့်လည်ပတ်နိုင်ရေးနှင့် ခေတ်မီ အဆင့်မြင့်ဆီစက်များ အမြန်ဆုံးအကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရေး အတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာများ၊ စားသုံးဆီ ထုတ်လုပ်ရောင်းချရာတွင် စားသုံးသူများဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံမြေဩဇာ၊ မျိုးစေ့နှင့် စိုက်ပျိုးရေးဆေးလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း မှ တာဝန်ရှိသူများအားတွေ့ဆုံ၍ ပြည်ပမှ ဓါတ်မြေဩဇာ နှင့် သွင်းအားစုများတင်သွင်းရာတွင် သွင်းကုန်လိုင်စင်များ အချိန်မီရရှိရေး၊ တောင်သူများထံ စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ အချိန်မီ ရောက်ရှိ အသုံးပြုနိုင်ရေး နှင့် စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ အရည်အသွေးပြည့်မီရေး၊ အတုအပတားဆီးကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာများ ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ညနေပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှင့်တာဝန်ရှိသူများသည် ကန်တော်ကြီး မြေပဒေသာကျွန်းရှိ စိုက်ပျိုးရေးပြတိုက်သို့ရောက်ရှိကြရာ စိုက်ပျိုးရေးပြတိုက်တာဝန်ခံ က စိုက်ပျိုးရေးပြတိုက်၏ သမိုင်းကြောင်းနှင့် လက်ရှိခင်းကျင်းပြသထားမှုများကို ရှင်းလင်း တင်ပြသည်။တင်ပြချက်များအပေါ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး က ပြတိုက် နှင့် ပြခန်း ၏ ကွဲပြား သည့် ရည်ရွယ်ချက် နှင့် အခင်းအကျင်းများအပေါ် အခြေခံ၍ လယ်ယာကဏ္ဍဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ မျှဝေနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သော ပြုပြင်မွမ်းမံမှု ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက် များ၊ တန်ဖိုးကြီး အနုပညာလက်ရာများ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းရန် နှင့် ပြည်သူများ စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ရှုလေ့လာရင်း အပန်းဖြေနိုင်သည့် သာယာလှပသော ဝန်းကျင် တစ်ခု အဖြစ် ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက် များကို ဆွေးနွေးမှာကြားသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့သည် စိုက်ပျိုးရေးပြတိုက်အတွင်း ခင်းကျင်း ပြသထားသော ပြခန်းပြကွက်များကိုလည်းကောင်း၊ မြေပဒေသာဥယျာဉ်ရှိ စိုက်ပျိုးရေး ပစ္စည်းအရောင်း ဆိုင်များ၊ ပျိုးပင်များ ပန်းအလှပင်များ အရောင်းဆိုင် တို့ကိုလည်းကောင်း ကြည့်ရှု အားပေး ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
crd ... www.agri.com.mm
Embedded video for ဒူဘိုင်းကုန်စည်ပြပွဲ Dubai Expo-2020 တွင်ကျင်းပသည့် အာဆီယံနိုင်ငံများဆိုင်ရာ သမုဒ္ဒရာရေရှည်တည်တံ့စေရေး အဆင့်မြင့် ဆွေးနွေးပွဲသို့ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်
Office No. (15),Office No. (36)(NayPyiTaw)
Tel: 067-410004 (လယ်ဆည်ကဏ္ဍ)
Tel: 067-408434, 067-408212, Fax: 067-408049 (မွေးရေကျေးလက်ကဏ္ဍ)
Copyright © 2016 Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation